व्हील - iSearch
सुरु बच्चा र बच्चा खिलौने प्ररित गर्नेवाला
हाम्रा छोराछोरीहरू स्वाभाविक कदम उठाउँछन्। यहाँ सम्म कि सबै भन्दा जवान सबै चाल मा छन्। लक्षित सामग्रीको साथ हामी प्रेरणा र हाम्रो छोराछोरीलाई प्रोत्साहन दिन सक्छौं। के यो बच्चा हो tricycle अब सन्तुष्ट छैन, बाइकका लागि तर अझै पनि सानो छ प्ररित गर्नेवाला संक्रमणकालीन चरणमा एक ठूलो साथी। व्हीलसँग, बच्चाले आवश्यक ब्यालेन्स विकास गर्दछ, जुन साइकल गर्न सम्भव छ।
एक उत्प्रेरक के हो?
प्रवर्तक एक वाहन हो जुन मान्छे को शक्ति द्वारा संचालित छ, बिना pedals। कार्ल वान ड्रेइसले यसलाई 1817 आविष्कार गरे। उनको पछि यसलाई "द्रिसिन" भनिन्छ। वैकल्पिक रूपमा खुट्टामा खुट्टा धकेल्दा, उत्प्रेरक गतिमा आउँछ।
साथै Drais समय मा बच्चाहरु को लागि एक मोडेल थियो, "steerable Celerette"। 20J मा। त्यहाँ 2-6 वर्ष-उमेरका लागि "ब्यालेंस साइकल" थियो।
1997, उत्पाद डिजाइनर रल्फ मार्टन्स ले यस बच्चाहरु को वाहन को संशोधित गरे। त्यसोभए, व्हीलले बच्चाको हृदय पुनर्स्थापना गरेको छ।
किन एक उत्प्रेरक:
मानवको भित्री कानमा भित्री उपकरण हो। यस संतुलनको लागि धन्यवाद, हामी आफैलाई राख्न सक्षम छौं, आफैंलाई अन्तरिक्ष, अनुभव घूर्णन आंदोलन र हाम्रो शरीरको गतिवर्णनमा। "सन्तुलनमा रहँदै" रोजगारीको जीवनमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ, भित्री भावमा पनि: सन्तुलन, सन्तुलन, यी क्षमताहरूले हाम्रो सम्पूर्ण प्रभावकारी जीवनका साथ जीवनलाई महसुस गर्न सजिलो बनाउँछ। भित्तामा प्रविधिलाई दीवारमा सन्तुलित गर्न, तालुमा दौडिरहेको वा पहिएको दौडमा प्रशिक्षित गरिन्छ। व्हील साइकलको एक राम्रो पूर्ववर्ती हो, किनभने बच्चाले सन्तुलनको साथ तुलनात्मक सम्झौता सिक्दछ।
आज, वैज्ञानिकहरू शैक्षिक खिलौनेहरू शिक्षकहरूलाई विकास गर्दैछन्। लगभग3बाट। बच्चाले कसरी पाङ्ग्रा लगाउन सिक्न सक्छ। तथापि, यस विषयमा निर्माताहरू भिन्न छन्। बालबालिकाहरू व्यक्तिगत रूपमा विकास गर्छन्, प्रत्येकसँग विभिन्न आवश्यकताहरू र क्षमताहरू छन्।
एक प्रवर्तक को लागी केवल बैलेंस जरूरी छैन: एक प्रत्यारोपण बच्चाहरु लाई कुनै पनि समय जमीन मा आफ्नो खुट्टा राखन सक्षम फायदा प्रदान गर्दछ, जो जमीन आसंजन र सुरक्षा प्रदान गर्दछ। बच्चाले ऊर्जाको खुट्टालाई ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ, यसले गतिसँग सम्झौता गर्न र उनीहरूको आकलन गर्न सिक्छ। कहिलेकाँही बच्चाले दौडिरहेको छ, कहिलेकाँही आफुले आफुले पूर्ण रूपमा रोल गर्छ, यो छिट्टै छिटो हुन्छ जब यो डाउनहिल हुन्छ। बच्चाले वातावरण सर्वेक्षण गर्ने क्षमता पाउँछ: अन्य व्यक्तिहरू वा बाधाहरू कहाँ छन्? के उनीहरू हिँडिरहेका छन् वा होइनन्? तिनीहरू मेरो तिर आउँदैछन्, वा तिनीहरू मबाट टाढा जान्छन्? यी सबै प्रक्रियाहरूले बच्चालाई बुझ्न, प्रक्रिया र ठाउँमा आफूलाई बुझ्न सिकाउँछ। यसले पहिचान गर्न सक्दछ कि तपाइँ आफ्नो शक्तिलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि खुट्टा दौडेर थकित छन् भने, तिनीहरू धेरै मोडेलमा चौडा फ्यान्डबोर्डमा पार्क गर्न सकिन्छ।
व्हीलले बच्चाहरूलाई थप विकासको लागि खेल्ने अवसर प्रदान गर्दछ। एक प्रोभेलर खरिद गर्दा, आमाबाबु निर्माताको निर्देशन अनुसार जिज्ञासा रहन हुँदैन, तर उनीहरूको आफ्नै बच्चालाई हेर्न।
मेरो बच्चाको लागि कुन पहल:
पहिया बच्चाहरु को हृदय को रूप मा धेरै अलग डिजाइन मा उपलब्ध छ। यदि एक बच्चा गुलाबी चक्रको साथ बगैचा मार्गमा घुमाउन चाहानुहुन्छ भने, अर्कोमा माछा मा स्यान्डबर्गलाई जित्न चाहन्छ। आमाबाबुले एकदम अप्परर चयन गर्न सक्दछ जुन आफ्नो बच्चालाई ठूलो आपूर्तिको अधीनमा राखिन्छ।
एक प्रवर्तक मा बच्चा काठ को बगल मा बैठता छ र पैर संग जारी जारी राखन को लागि pushes। यसैले उमेरले सही मोड चयन गर्ने बेला उमेरले निर्णायक भूमिका खेल्दैन। यो आकारमा निर्भर हुन्छ: यदि बच्चाले काठीमा बस्छ भने, यो खुट्टाले मैदानमा दृढ रहन सक्दछ, त्यसपछि काठको उचाई सही छ। एक चर सीट उचाई अधिक बहुमुखी छ र बढ्छ। त्यस्तै गरी, उचाई समायोज्य ह्याण्डब्यान्ड बच्चाको आकारमा अनुकूल गर्न सकिन्छ।
बच्चाले शान्तिमा नयाँ पहिया कोसिस गर्नुपर्छ, मात्र त आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई साथ दिएर न्याय गर्न सक्दछन् कि यो सही मोडेल हो। अधिक ध्यानपूर्वक ट्रक चयन गरिएको छ, अब लामो सानो बाइकले यो आनन्द लिनेछ। एक अभिकर्ताले तीन वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मैले कुन मोडेलको विचार गर्नुपर्दछ:
साना काठका पाङ्ग्राहरू पनि "दौड दौड" को रूपमा बेच्न सकिन्छ र ठूलो पाङ्ग्रा भन्दा पहिले प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिनीहरूको काठको साइकल, आंशिक रूपमा रबड परिपक्वतासँग, चिकनी सतहहरूको लागि उपयुक्त छ। प्रवक्ता बिना बजेट को जोखिम ओपेड पहियों संग कम छ। धेरै काठ को मोडेल मा, काठ को ऊंचाई मा तय गरिन्छ, जो केवल एक निश्चित आकार को उपयोग को अनुमति दि्छ। काठ व्यवहार गर्नु पर्छ ताकि यो विभाजन हुँदैन।
उदाहरणका लागि, सुन्दर मोडेल जनो जो जम्मूक्स, केवल 3243 बाट उपलब्ध हुनेछ। यो कसरी हिंड्न सिक्ने लक्ष्य छैन। यो अभिकर्ता मूल Vespa मा मोडेल गरिएको छ। यो पनि inflatable टायर छ, र काठी उचाइमा समायोज्य छ।
जानोद J03243 व्हील ठूलो काठ स्कूटर, "मिंट" प्रदर्शन
एक मूल Vespa वा काठ। 3-5 वर्षका बच्चाहरुका लागि उपयुक्त
सहि काठको पा wheel्ग - सन्तुलनको लागि र सहायक व्हीलहरू बिना सजीलो साइकल चलाउन सिक्नको लागि उपयुक्त
Inflatable टायर। उचाइ समायोजनयोग्य सीडल। अधिकतम लोड: 50 किलो
हामी Bikloon श्रृंखलाबाट हेलमेट पहने सुझाव दिन्छौं
त्यहाँ विभिन्न प्रकारका टायरहरू इस्पात वा एल्युमिनियम बनेका हुन्छन्: प्लास्टिक वा वायु टायरहरूसँग एल्युमिनियम रिमहरू प्रायः बलियो हुन्छन् र कम रोलिंग प्रतिरोध गर्छन्। तथापि, बच्चा घुमाउने वाल्वमा घाइते हुन सक्छ।
तेर्सो वस्तुहरू जस्तै नाखहरू वा बिच्छे टुक्राहरू, त्यहाँ "प्लेट" हो, कुनै अन्य साइकलको साथ।
विशेष पु फ्यामबाट बने टायरहरू वायु टायरहरूको भन्दा ठूलो छन्, पुनः पम्प गर्न आवश्यक छैन र सजिलै नाश गर्नुहुन्न। यद्यपि, हावा टायरको धेरै मोडेलहरू सफल भए।
एक मजबूत मोडेल कम्पनी कैटलर बाट छिटो पर्वत बाइक जस्तो देखिन्छ।
यहाँ सडकमा बच्चाहरू "" ठूला जस्तैजस्तै "10 इन्च टायरसँग एक अत्यन्त टिकाऊ प्रोफाईल छ र लगभग कुनै पनि प्रकारको इलाकाको लागि उपयुक्त छ। इस्पात फ्रेम scratching र प्रकाश को प्रतिरोधी छ र यसैले धेरै तनाव को सामना। काठी उचाइ-समायोज्य हो, ह्यान्डबारले सीमित पार्ने र स्टीयरिंग पैडहरू प्रभावित गरेको छ, जसले पतन अगाडी बढाउँछ। ह्याण्डबारमा एंटी-स्लिप हिप्स ड्राइभ गर्दा हातको पूर्ण नियन्त्रण अनुमति दिन्छ।
केही निर्माताहरूले उनीहरूको ईन्टरनेसनलाई विशेष सम्पर्क दिन्छन् साना एक्स्ट्रासका लागि धन्यवाद: होडोराको क्रिसमस केटाले अगाडि र पछि फर्केका छन्।
यो एल्युमिनियमबाट बनाइएको छ र यसकारण धेरै हल्का। 12 इन्च टायर सजिलो र कुनै पनि सतहको लागि तयार छ। गहिरो प्रवेशले साना छोराछोरीलाई पनि सुरक्षित रूपमा चक्रमा चढाउन अनुमति दिन्छ। विस्तृत फड्कोबोर्डमा खुट्टाबाट आराम गर्नका लागि खुट्टा पनि उठाउन सकिन्छ। पक्षको साथमा, प्रवर्तकले पपको साइकल को बगलमा पार्क गर्न सकिन्छ। ह्यान्डगिप्समा सुरक्षा लुटहरू साना हातको फिसिङ रोक्न।
हामीलाई सामानहरू चाहिन्छ:
त्यहाँ धेरै सामानहरू अपग्रेड गर्न प्रयोग गरिने थुप्रै सामानहरू छन्: एक बेल धेरै मोडेलहरूमा सजिलै खराब हुन सक्छ। ह्यान्डबारमा टोकरीमा, आमाबाबुलाई त्याग्नु पर्छ। यसले पतनको समयमा चोटको जोखिम बढाउन सक्छ। जर्मन ट्राफिक सुरक्षाले अघिल्लो चक्र ब्रेकको सिफारिस गर्छ। ह्यान्डब्रेको प्रयोग गर्दा बच्चाले आफ्नो खुट्टाको साथ रोक्न धेरै महसुस गर्दछ।
व्हील चलाउँदा बच्चाले महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू एकत्रित गरेदेखि, कहिलेकाँही पनि पतन हुनेछ। यसैले यो पहियामा एक राम्रो फिटिंग साइकल हेलमेट लगाउन अपरिहार्य छ। इष्टतम फिट र सुरक्षा प्रकार्य सुनिश्चित गर्नको लागि यहाँ आमाबाबुले एक विशेषज्ञ खुदरा विक्रेतालाई भेट्नुपर्छ।
यदि मेरो बालबालिकालाई प्रवर्तक चाहिन्छ भने:
एक छोटा सा बच्चाहरु लाई सानो सानो संसार को जीत को लागि एक अद्भुत तरीका हो। परिवारसँग हिड्दा, दौड बाइक एक महान साथी हो। अब आमाबाबुले आफ्नै गति देखाउन सक्दछन् र बच्चालाई उनको पहियासँग रोल गर्न मजा छ। यसले सन्तुलनमा रहन सिकाउँछ र गति र शरीर धारणाको सामना गर्न आत्म जागरूकता बढाउँछ। कहिलेकाहीँ आमाबाबुले राख्नु पर्छ, किनकि पहियालाई बढि गतिमा पुग्छ। वास्तविक साइकलिस्टहरूले आफ्नो साथीलाई तीन वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्छन् र बाइकमा निकै सजिलो हुनेछ।
तपाईं चुनौतीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि साना नायकहरूले आफ्ना धावकहरूमा टेक गर्न सक्छन्, भिडियोमा "गीडी Kinderlaufradtest" तपाइँ ट्यूबमा।
अर्को लेखपरिवर्तन चटाई